जहाँ दुलहाका फुपाजु र भिनाजुले तान्छन बयलगाढा! - E Net Nepal
Home Amazing World जहाँ दुलहाका फुपाजु र भिनाजुले तान्छन बयलगाढा!
जहाँ दुलहाका फुपाजु र भिनाजुले तान्छन बयलगाढा!
E NET NEPAL 10:03 PM Amazing World,
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, ठाउँ र समाज अनुसार त्यहाको रितिथिति,भेषभुसा, परम्परा फरक फरक हुन्छन। तर आज हामी जुन परम्पराको बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौं त्यसको बारेमा जानेपछि तपाई पनि छक्क पर्नुहुनेछ।
हुन त बिबाहमा मामाले भान्जा/भान्जीलाई बोकेर जग्गे घुमाउने, अन्माउने र बिदा गर्ने जस्ता कार्य त नेपालकै बिबाहमा पनि गर्ने गरिन्छ तर भारतको छात्तिसगढ़को ग्रामिण क्षेत्रमा आज पनि बिबाहको समयमा एक अनौठो परम्परा निभाईन्छ।
सामान्यतया बयलगाढालाइ दुइवटा साँढे अर्थात बयलले तान्ने गर्छन। तर छात्तिसगढ़को ग्रामिण क्षेत्रमा आज पनि बिबाहको समयमा एक यस्तो अनौठो परम्परा निभाईन्छ, जसमा बयलको ठाउँ दुलहाका फुपाजु र भिनाजुले लिन्छन। दुलहाका फुपाजु र भिनाजुले दुलहा सवार भएको बयल गाढा तान्छन र घरसम्म पुर्याउछन। आदिमकाल चल्दै आएको यो परम्पराको बिषयमा कसैले सोध्यो भने यो परम्परालाई अहिलेसम्म सबै गाउँले मिलेर जोगाइराखेका र अगाडी पनि जोगाइराख्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्छन गाउँलेहरु।
By E NET NEPAL at 10:03 PM